Maitiro ekuderedza kushandiswa kwedata muIOS 9 | IPhone nhau
Maitiro ekuderedza kushandiswa kwedata muIOS 9
Alejandro Cabrera | | iOS 9, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Sezvo zvirongwa zvakatanga kuve ne "risingapfuure dhata rekuchinjisa" vazhinji vedu hationgorore kushandiswa kwedata mukati memwedzi, asi panosvika bhiri rekambani tinowana kushamisika kukuru, nekuti marongero mazhinji ane muganho wedata kana tikazvipfuudza, an "kuwedzera kunwa" kunotanga kubhadhariswa. Neshanduko nyowani muIOS 9 kwave paine kunyunyuta kwakawanda nezve yakakwira nharembozha yekushandisa. Kana izvi zviri izvo kwauri, isu tine zvimwe matipi iwe aunogona kushandisa kudzikisa zvakanyanya yako nhare yekushandisa data pane yako iPhone.
1 Dzima kushandiswa kwedata nhare kweICloud.
2 Disable otomatiki kurodha pasi nharembozha muTunes Store neApp Store.
3 Dzima Wi-Fi Kubatsira.
4 Chengetedza kushandiswa kwematafura enhare kune zvimwe zvinoshandiswa.
5 Dzvanya kumashure kwekugadzirisa.
6 Dzivisa kutenderera mimhanzi yepamusoro.
7 Dzivisa kushandisa data renhare zvachose.
Dzima kushandiswa kwedata nhare kweICloud.
Kana iwe ukashandisa iCloud kushanda pane akasiyana madhijitari, izvi zvinogona kutungamira kune yakakwira kupfuura yakajairwa dhata yekushandisa. Kana iwe uri kushanda pane Gwaro gwaro, iwe unenge uri kushandisa nharembozha panguva yekushandisa. Zvese izvo zvigadziriso uye shanduko zviri kuchengetwa mugore uye unenge uchishandisa data panguva ino. Kudzima kushandiswa kwedata nhare muICloud tevera matanho anotevera:
Vhura Zvirongwa uye pinda ICloud.
Press on iCloud Drive.
Pachiratidziro chinotevera, pfuurira kuzasi uye pazasi iwe unofanirwa kusaita «Shandisa nharembozha".
Kana uchiremadza chimiro ichi, iCloud haichashandisi nharembozha kuendesa magwaro kana dhata, izvo zvichaponesa vashandisi yakawanda mobile data.
Disable otomatiki kurodha pasi nharembozha muTunes Store neApp Store.
Kudhawunirodha mashandisiro ekushandisa kuchishandiso chako kunogona kutungamira kune rinorema dhata rekushandisa. Kana iwe uchizo dhawunirodha izvi otomatiki meseji, zviri nani kuti iwe uri yakabatana newebhu yeWi-Fi usati wadhaunirodha nekuvandudza maapplication ako, nekuti, mamwe ane hukuru hwakakura kwazvo.
En Zvirongwa tsvaga iTunes Chitoro neApp Store.
Muchikamu chino tsvaga «Shandisa nharembozha«. Disable iyi sarudzo uye iwe wakanaka kuenda.
Dzima Wi-Fi Kubatsira.
Tsigiro yeWi-Fi inogona kungokuvadza, nekuti inogona kubatsira zvakare. Paunenge uchiedza kupa isina kusimba yeWi-Fi chiratidzo, Wi-Fi inobatsira inotanga kushandisa nharembozha kubatsira nebasa rakaipa. Kunyangwe izvi zvisingabatsire, unogona kunge uchishandisa toni yedata renhare usingazvizive. Kuremadza ichi chinhu:
Vhura Zvirongwa uye tinya pa Nharembozha.
Bhura kusvika kumagumo uye pazasi iwe unofanirwa kumisikidza iyo Tsigiro yeWi-Fi.
Kana iwe wakave nekuwedzera kwekushandisa kwedata, kuve kuti iwe unoshandisa network yeWi-Fi, zvinogona kunge iko kuti kutsigirwa kweWi-Fi ndiro dambudziko.
Chengetedza kushandiswa kwematafura enhare kune zvimwe zvinoshandiswa.
Kune mamwe mafomu anoshandiswa kupfuura mamwe. Mimwe yeaya maapplication haatore data zvachose, uye vamwe vanoita. Nguva dzose zvakanaka kuziva ayo maapplication anoshandisa data, uye zvinotonyanya kukosha, kana iwo maapplication achida kuwana mukana kune data renhare.
Enda ku Zvirongwa uye pinda Nharembozha.
Paunenge uchinge uri mukati, pfuurira pasi kusvikira wawana iyo runyorwa rwekushandisa.
Kutanga kuremadza kushandiswa kwefoni data yezvishandiso zvaunoona zvakakodzera.
Dzvanya kumashure kwekugadzirisa.
Uku kunyengera kwakajairika kwe ponesa nharembozha. Zvishandiso zvinogona kugadzirisa ruzivo kumashure, iwe usiri kuzvishandisa uye izvi zvechokwadi zvinoshandisa data. Iyi sarudzo inogona kuremara uye haina kukanganisa mashandisiro uye kudyidzana neiyo iPhone.
Enda kune Zvirongwa -> General uye tinya pa Gadziridza kumashure.
Zvino dzima chimiro chiri pamusoro. Zvikumbiro zviri ichachinja kubva pagirini kuva chena.
Iwe unogona kuona iyo runyorwa rwemaapplication anga aine kumashure kumashure pazasi peyakaremara sarudzo.
Iyi sarudzo inowanzoremara ye chengetedza bhatiri, asi inoshanda kuchengetedza data renhare zvakare.
Dzivisa kutenderera mimhanzi yepamusoro.
Apple yakagadzira sarudzo yekuteerera kumhando yepamusoro mimhanzi, zvisinei kuti unoshandisa Wi-Fi kana nhare mbozha. Eheka, iyo yepamusoro mhando, yakakura faira. Iyo yakakura faira, iyo yakawanda data inodikanwa kuti ifambise. Naizvozvo, kana iwe ukashandisa Apple Music uye uchida kusevha pane data, unofanirwa kudzima iyi sarudzo.
Vhura Zvirongwa uye enda kusarudzo mumhanzi.
Tsvaga uye kudzima sarudzo Yakakwira mhando ine nharembozha.
Kana iwe uchinyatsoda kudzivirira kushandisa nharembozha, iwe unogona zvakare bvisa iyo Shandisa nharembozha sarudzo. Nesarudzo iyi yakaremara, iyo iPhone inongokwanisa chete kushandisa Apple Music pamusoro peWi-fi.
Yakakwira-mhando deactivation ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo kune avo vanoda kuteerera mimhanzi kuburikidza nharembozha, asi havadi kunyanyisa kushandiswa kwemafaira makuru. Kana iwe ukashandisa Pandora kana Spotify, unogona kuve nechokwadi chekuti vanongoshandisa chete netiweki yeWi-Fi.
Dzivisa kushandisa data renhare zvachose.
Sekupedzisira sarudzo, unogona bvisa data renhare zvachose. Kana iwe uri muganho wako wemwedzi weGigas wekushandisa uye iwe usiri kuda kubhadhara kuwedzera, saka iyi ndiyo nhamba yekutanga sarudzo yekushandisa.
Enda ku Zvirongwa -> Nharembozha.
Bvisa sarudzo Nharembozha.
Ndidzo dzakanakisa Matipi Ekudzora Yakakwira Nhare Dhata Kushandiswa pane chako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 9 » Maitiro ekuderedza kushandiswa kwedata muIOS 9
Ndinoona zvisingaite kuti hapana akataura nezve chero chinhu nezve kutadza kwebhatiri mu iphone 6s uye 6s plus. Foni inobhadharisa zvakakwana. Asi pane dzakawanda nguva, mushure mehafu yenguva yekuchaja, chiratidzo chebhatiri hachigadzirise. Kana kusimudzira 2 kana 3%. Kana iwe ukadzima iyo terminal uye nekuvhurazve, iyo chaiyo bhatiri yatove yakaratidzwa. Zvairatidzika kwandiri sekutadza kwakakomba kuve chimwe chezvinhu zvakakosha zvefoni. Ndine ma iphone matatu akachinja uye dambudziko rinoramba riripo, uye akagadzirwa seatsva kana nerejenzi yekudzoreredza. Ini handina mufaro. Izvi zvisingafungidzike glitches muapuro. Pamusoro kungoedza kana raive dambudziko rekuchengetedza, ndakariwana.
Ini ndakaridza kuitisa kuti ive nyowani uye ikozvino iyo yapfuura backup ndakairasa nezvose zvayaisanganisira. Mune ino foramu forum vanhu vanogunun'una, uye vazhinji vanogunun'una nezvedambudziko iri. Uye ini handichaziva kana iri software kana Hardware nekuti zvinoita sekunge iri muma6 chete. Zvakaratidzika kuva zvinonyadzisa kwandiri kukundikana kwakakomba zvakadaro kune nhare ye 900 euros
Chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri nevatanhatu zvakare ...
Bear yechiJudha akadaro
Zvakanaka, izvo neimwe nzira zvinondisimbisa, nekuti ingave iri dambudziko re software uye kwete rakaomarara, iro rinogona kugadziriswa neyekuvandudza, asi zvinoita senge rinotyisa. Izvo zvinowanzoitika neiyo iPhone yakavharwa. Nechidzitiro chiri pamusoro, chiratidzo chekuchaja chiri kugadzirisa. Asi ndezvekuti pamberi zvakare, uye kana uchitangazve, pakarepo bhatiri rinokwira rinosvika makumi maviri muzana
Kune rimwe divi, zvese kamwe-kamwe, pese pandinoibatidza zvinondibvunza kuti ndiongorore maapuro id (chimwe chinhu chisina kumboitika kwandiri mumakore mashanu). Uye kurwadziwa mugotsi. Chero mhinduro?
Darwin figueroa akadaro
PAKUPEDZISIRA KWAZVO ZVESE ZVAKANAKA USASHANDISA IPHONE
Pindura Darwin Figueroa
Enderera neyako Samsung grungy ine android ... Uyo anoda uye asingakwanise
Gondwana no Nemuri ch akadaro
Parsley haazive kuti Android yakapetwa kane chiuru kupfuura iOS, inova inoshanda uye ine zvese zvakagadziriswa apo chirongwa ichi chemhashu chinofanira kuchipa chiuru mirairo. IOS chirongwa chevanorasika nepfungwa, kana iwe usingazive.
Gondwana no Nemuri ch
Wozniak anosarudza laptop kune iyo Pro Pro
Mibvunzo yaunogara uchizvibvunza iwe pachako paunenge uchipaza jeri